I-Italy Business Uhlu Lwezingcingo | Thenga Izinhlu Zomakhalekhukhwini | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Italy
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Italy
Izinombolo Zefoni Yase-Italy
Inombolo yefoni yebhizinisi lase-Italy ifaka yonke inamba yezinombolo zebhizinisi e-Italy noma izinombolo zocingo. Uzothola wonke umuntu webhizinisi wase-Italy njengomnikazi, i-ceo, umphathi, i-cfo, izinombolo zocingo zomongameli. Zonke izinombolo ziluhlu oluqinisekisiwe futhi oluqinisekisiwe. Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Italy luzokunikeza imiphumela emihle yemikhankaso ye-sms yebhizinisi lakho noma yemikhankaso yocingo.
Database yakamuva Yokuposa ingumthombo omkhulu wohlu lwezinombolo zefoni yebhizinisi lase-Italy. Database Lokugcina Lokuposa libuye lihlunge ukuhola kwakho ngohlu lwezinombolo zeselula noma uhlu lwezinombolo zocingo. Futhi uthola izimboni zakho ezihlosiwe noma uhlu lwezinombolo zocingo lomuntu othintana naye. Database Lokugcina Lokuposa kuzokusiza ekutholeni impumelelo ibhizinisi lakho online.
Thenga uhlu lwezinombolo zefoni yase-Italy
Inani Lamarekhodi: 215K
Uhlu lwefoni yebhizinisi lase-Italy luyindawo yokuqhafaza enabamukeli abajwayelekile abavamile okuluhlu lwebhizinisi lolimi oluyilo futhi oluqinisekisiwe e-Italy oluhlanganiswe ezinhlwini. Idatha enenzuzo enkulu esetshenziselwa ukushaya amakhaza, ukuthumela izingcingo, ukumaketha kwe-sms kanye nelinye isu lokumaketha ukulenza likulungele kakhulu uma kuziwa ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho.
Ukuthenga uhlu lwefoni yasebhizinisi lase-Italy kuqukethe amarekhodi athembekile abuyekeziwe angama-215,000 ohlu lwebhizinisi lebhizinisi afinyelela ku- $ 1,050, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engenzekayo engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Uhlu lwezinombolo zebhizinisi lase-Italy olusuka kuDatha Yokugcina Yama-imeyli luhlu olungabizi kakhulu olungathola ikhasimende lakho ngqo lebhizinisi lakho, yiluphi uhlu lwefoni olunikezwe kuwe ngaso leso sikhathi, ukuthi okuholwa umkhondo kungalandwa kudeskithophu yakho, ngakho-ke sesigcwaliswe imininingwane futhi ihlanganiswe ngemithombo eminingana.
I-Database yakamuva Yokuposa, iyisayithi elinamandla kakhulu futhi elingabizi kakhulu ngokubaluleka kohlu lwedatha yebhizinisi lokukhankasa kwakho nokuhola umkhankaso wokuhola e-Italy njengoba uhlu lwethu lwezingcingo luyimpendulo yebhizinisi lakho elikhulayo lokuthumela izingcingo nge-telemarketing, ukumaketha kwe-sms noma imikhankaso yokubiza amakhaza iyilungelo indlela yokuxhumana namakhasimende akho ngempumelelo.
Italy Business Ucingo Umbuzo & Impendulo